Injeniera rosiana voasambotra noho ny fampiasana supercomputer hitrandrahana Bitcoin | Vaovao momba ny gadget
Andiana injeniera niasa tao amin'ny Federal Nuclear Center any Russia, toerana nokleary miafina tampoka, dia voasambotra taorian'ny nanandramany nampiasa solosaina matanjaka indrindra ao amin'ny firenena ahy Bitcoin. Toa tsy misy farany ny tazo cryptocurrency. Na dia amin'ny tranga sasany aza dia mandeha any amin'ny tsy ampoizina indrindra izany.
Farany, ity vondrona injeniera ity dia notazonin'ny polisy. Ny laboratoara dia miorina ao amin'ny tanànan'ny Sarov any Sarov. Ao amin'ireo fotodrafitrasa ireo no ilay solosaina faran'izay mahery izay nanandraman'izy ireo nampiasaina hitrandrahana Bitcoin. Na dia tsy nandeha tsara aza.
Araka ny tatitra maromaro, Efa natomboka ny raharaha heloka bevava atao amin'ireo mpiasa. Satria tsy nahazo alalana ireo andrana ataon'ny mpiasa hitrandraka Bitcoin ireo. Satria ny mpiasa Tsy mahazo mampiasa ireo fotodrafitrasa ireo izy ireo ho an'ny tena manokana. Noho izany antony izany dia voatazona izy ireo.
Fantatry ny injeniera fa angovo betsaka no ilaina amin'ny fitrandrahana Bitcoin. Izany no mahatonga azy ireo miloka amin'ny fampiasana an'ity solosaina ity amin'ny hery lehibe, mahery indrindra any Rosia. Ankoatr'izay, nieritreritra izy ireo fa tsy hisy hahamarika fa nampiasaina ny solosaina noho io tanjona io.
Ny fotoana ifandraisan'ny solosaina amin'ny Internet, nampandrenesina ny sampan-draharahan'ny fiarovana ny fotodrafitrasa. Avy amin'ny zavatra fantatry ny drafitry ny mpiasa hatramin'ny voalohany. Satria tsy mifandray amin'ny Internet mihitsy io solosaina io. Rehefa avy nampandrenesina dia niroso tamin'ny fisamborana ireo mpiasa ireo izy ireo.
Amin'izao fotoana izao dia misy ny dingana manohitra ireo injeniera ireo izay te-hanan-karena amin'ny Bitcoin. Na dia amin'izao fotoana izao aza tsy nisy voalaza momba ny toe-pahasalamany na ny daty mety hisian'ny fitsarana azy. Ny hany zavatra fantatra ankoatry ny fisamborana azy ireo dia ny fandroahana azy ireo. Tantara iray farafaharatsiny izay avy any Russia. Ny tazo cryptocurrency dia mitohy miteraka vaovao mahagaga.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Cryptocurrencies » Rosia misambotra injeniera marobe amin'ny fampiasana supercomputer hitrandrahana bitcoin
Olympus Pen E-PL9: Volavola Retro miaraka amin'ny firaketana 4K
Notsapainay ny jiro mandeha amin'ny alàlan'ny sensor Aukey LT-SL1 ivelan'ny trano